Maamulka 'Somaliland' oo sheegay in ladhammaystiray dhismaha Madaarka Berbera.
Saturday November 20, 2021 - 10:22:42
Munaasabad ka dhacday magaalada Berbera ee gobolka waqooyi galbeed Soomaaliya ayaa xarigga looga jaray dhismaha cusub ee madaarka caalamiga magaaladaasi.
Maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ayaa sheegay in lacasriyeeyay garooka diyaaradaha Berbera islamarkaana lagu bixiyay lacago malaayiin dollar ah.
Dhismaha madaarka oo socday muddo 3 sana ah waxaa qandaraas ku qaadatay shirkadda dekadaha Imaaraatka Carabta ee lagu magacaabo DP World, C/risaaq Ibraahin Cataash oo ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta Jidadka 'Somaliland' ayaa warbaahinta usheegay in hanaanka loo dhisay garoonka Berbera uu yahay mid casri ah.
Mar wax laga weydiiyay wararka sheegaya in qeyb kamid ah madaarka laga dhigay mid melleteri ayuu arrinkaas xaqiijiyay balse wuxuu ka meermeeray in ujeedku uu yahay in hanaan melleteri loo isticmaalo.
"arrimahaasi waa uun waxyaaba ku tirikuteen ubadan garoonku waa mid rayid basle waxka reebaya malahan in wax kale loo isticmaalo" ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaadiidka maamulka Muuse Biixi.
Madaarka Hargeysa ayaa ah midka ugu weyn qaaradda Afrika ee leh wadada diyaaraduhu ku ordaan ee loo yaqaan Run-way, mucaaradka deegaannada 'Somaliland' ayaa ku eedeeyay maamulka Muuse Biixi in uu kaabiyaashii dhaqaalaha wadanka ugacan geliyay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta.
Sawaariikh lagu weeraray caasimadda maamulka Yahuudda.
Sarkaal Sare Oo Ka Tirsanaa Maamulka 'Jubaland' Oo Lagu Khaarijiyey Kismaayo